डाक्टर साप भन्छन नेपालमा अझै केही महिना डेङ्गुरोगले आतङ्क फैलाउन सक्छ सावधान रहनुहोला ! बच्ने उपाए बारे जानकारी लिनुहोस ! – सुदूरखबर डटकम
डाक्टर साप भन्छन नेपालमा अझै केही महिना डेङ्गुरोगले आतङ्क फैलाउन सक्छ सावधान रहनुहोला ! बच्ने उपाए बारे जानकारी लिनुहोस !
मुलुकभर डेंगुको संक्रमण बढेपछि जनमानसमा त्रास उब्जिएको छ । तर समयमै उपचार गरे डेंगु सहजरुपमा निको हुने चिकित्सकहरु सुझाउँछन् । डेंगुको लक्षण देखिना साथ अस्पताल गएर उपचार गर्न चिकित्सकको सुझाव छ ।
सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनले डेंगु हुँदैमा आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था नहुने बताए । डा. पुनले लक्षण देखिनासाथ अस्पताल पुगेर परीक्षण गरी औषधि सेवन गरे यो रोग सहज रूपमा निको हुने बताए ।
‘डेंगुको प्रकोप जताजतै देखिएको छ, अझै दुई देखि तीन महिनासम्म प्रकोप देखिने सम्भावना छ,’ डा पुनले भने, ‘अब दशैं पनि नजिकिँदै छ दशैंको समयमा आवतजावत धेरै हुने भएकाले दशैंमा पनि प्रकोप देखिन सक्ने सम्भावन छ, त्यसैले समयमै सचेत हुनुपर्छ ।’
–कूलरमा रहेको पानीमा प्रत्येक हप्ता एक-दुई चम्चा मट्टितेल हालिदिने साथै जम्मा भएको पानी सफा गर्ने,